Ciidanka Somaliland Oo dib uga baxay Fariisimo ay Ku Lahaayeen Deegaanka Dukaraq Ee Gobolka Sool | Allbanaadir
Ciidanka Somaliland Oo dib uga baxay Fariisimo ay Ku Lahaayeen Deegaanka Dukaraq Ee Gobolka Sool
Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya jiidaha hore ee dagaal ay isku horfadhiyaan ciidamada Difaaca Puntland & Maleeshiyaadka Somaliland ayaa sheegaya in ay dhaqdhaqaaqyadu ay sii kordhayeen 48 saac ee lasoo dhaafay, ayna siyaaday cabsida laga qabo dagaal rasmi ah oo ka dhaca goobahaas.
Ciidamada Puntland ayaa shalay gaaray goobo ay doraad joogeen sahanka maleeshiyaadka Hargeysa, waxaana la xaqiijiyey in ay dhacday is rasaaseyn xoogan oo sababtay dhaawacyo soo gaaray dhinaca maamulka Hargeysa.
Wararku waxay sheegayaan in madaafiicda culus lays dhaafsaday shalab gabal dhicii, ilaa haddana mararka qaarkood la maqli karro hubka culus, inkastoo ay Somaliland soo gashay cabsidii ugu xooga badneyd.
Ila Wareedyo la isku halayn karo ayaa sheegaya in hubkii cuslaa Somaliland ay dib uga qaadeen deegaanada Higlada, Gambara & difaacyadooda Tukaraq, gaar ahaana baabuurta dagaalka ee ay ka mid yihiin kaarayaasha, cabsi ka qabaan dagaal culus oo lagu qabsado.
Sarkaal sare oo katirsan ciidamada Difaaca Puntland ayaa sheegay in ay hayaan xogaha ku aadan wararkaas, waxaana goobjoogayaal kusugan deegaanka Gooja-Cade oo uu yahay saldhigooda ugu weyn ay sheegeen in cabsi awgiis hubkaas dib loogu ceshay.
Welwelka iyo cabsida hadda soo wajahday maamulka Hargeysa ayaa ka dambeysay markii ay ogaadeen in ay Puntland ka go`an tahay in ay dib gacanteeda ugu soo celiso gobalka Sool, ayna ku wajahayso marxaladda dagaal toos ah.
Lama garanayo sidda ay xaaladdan noqon doonto, balse warar madax banaan ayaa sheegaya in labada dhinacba uu ka go`an yahay dagaal aan garan Karin xiliga uu bilaaban karro, waxaana socda abaabulkii ugu sareeyey.